သင့်အပေါ် သင့်ချစ်သူက စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းနေပြီလို့ သင်ထင်ရင် လုပ်သင့်တဲ့အရာ (၁၀) ခု | Women | Relationships | Duwun
သူက အရင်လို ဖုန်းတွေခဏခဏ မခေါ်တော့သလို မက်ဆေ့တွေလည်း မပို့တော့ဘူး။ ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာလည်း ပြောစရာ သူ့မှာ သိပ်မရှိဘူး။ အမြဲတမ်း သူ့မှာ အလုပ်ရှုပ်နေပြီး သင်နဲ့အတူ လျှောက်လည်ဖို့ သင်ပြောတိုင်း အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ရှောင်ထွက်နေပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူ သင့်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းနေပါပြီ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အဲဒီတော့ သင်ဘာလုပ်မလဲ။ သင့်ကို အရင်လိုချစ်ဖို့ သူ့ကို ပြောမလား? အရင်ထက်ပိုပြီး တွယ်ကပ်မလား? ပြဿနာရှာမလား?။ အဲဒီအချက်တွေဟာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေပါ။ အဲဒါတွေလုပ်မယ့်အစား ဒါတွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလား။
ယောက်ျားတစ်ယောက်က သင့်အပေါ် စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ထင်တဲ့အခါ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ နေချင်သလို နေလိုက်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လည်း ဂရုမစိုက်ချင်တော့ဘူး။ အိပ်မက်တွေ၊ ပန်းတိုင်တွေလည်းမေ့နေပြီ။ အလုပ်မှာလည်း စိတ်မ​ဝင်စားတော့ဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက် အတွက်နဲ့ အဲဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ သင့်ဘဝက ပိုပြီး သင့်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ကို တစ်ချိန်လုံး ဖုန်းဆက်နေမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုသာ လုပ်ပါ။
၂။ သူ့ကို Space ပေးလိုက်ပါ (သူ့ဘာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပေးလိုက်ပါ)
သူနဲ့ ဝေးကွာသွားမှာစိုးတဲ့အတွက် သူ့နားကို ပိုကပ်ဖို့ သင်စိတ်ကူးမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းက သူ့ကို ပိုဝေးကွာအောင် တွန်းထုတ်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီတော့ သူဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ သူ့ဘာသာသိအောင် သူ့ကို Space ပေးလိုက်ပါ။ သူနဲ့ ဝေးကွာဖို့ သင်မလိုလားသလို သင့်နားမှာ မနေချင်ဘဲနေနေရတဲ့ သူကိုလည်း သင်လိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခု သူက သင့်အပေါ် အာရုံမရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လည်း အဲဒီလို ပြန်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းပါပဲ။ ပြီးရင် သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ။ ပြဿနာတွေက အထင်အရှားရှိနေမှာ။ အဲဒီတော့ သင်တို့ကြားမှာ ဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာ သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ သင်လည်း သင်လိုချင်တာကို မေ့နေပြီး ဒီအတိုင်း ရေစုန်မျှောပြီး လိုက်နေခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ အခု ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချိန်ပါ။
၄။ သူ့ကို သင်တကယ်လိုချင်သေးလား စဉ်းစားပါ
သူနဲ့ ခါတိုင်းလို အမြဲတတွဲတွဲမဟုတ်ဘဲ ခပ်ခွာခွာဖြစ်နေတာ တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုသာမက သူ့အကြောင်းကိုလည်း ပြန်တွေးနိုင်ပါတယ်။ သူ သင့်အပေါ် ဆက်ဆံပုံတွေ၊ ချစ်သူသက်တမ်း တလျှောက်လုံး သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်စဉ်းစားပါ။ ငါ ဒီလို လူမျိုးနဲ့ ဘာလို့များ ဆက်တွဲနေတာလဲလို့ သင်တွေးမိကောင်း တွေးမိလာနိုင်ပါတယ်။
၅။ ပြပါ၊ မပြောပါနဲ့
သင်ဟာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းကို သူ့ကို ပြောပြနေတာထက် သူမြင်အောင် ပြတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အပြုအမူဆိုတာ စကားလုံးတွေထက် ပိုထိမိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူနဲ့တွေ့တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလှဆုံးနဲ့ သဘောကျစရာအကောင်းဆုံး မိန်းကလေး ဖြစ်နေပါစေ။
၆။ သူ့ဆီကို စာတစ်ကြောင်းလောက် ပို့ကြည့်ပါ။
သူဘယ်လို အကြောင်းပြန်မလဲကြည့်ပါ။ သူ့ကို အပြင်အတူထွက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခု မေးကြည့်ပါ။ သူ့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကနေ သင် အများကြီး သိလာနိုင်ပါတယ်။
၇။ သူ့ဘက်က မတုန်မလှုပ်ဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ဘက်က ချက်ချင်းဆက်သွယ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
တကယ်လို့ သူက ဘာမှ အကြောင်းမပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ အသာလေး နောက်ဆုတ်နေလိုက်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဘာမှမလုပ်သင့်သေးပါဘူး။ သူ့ကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီးမှ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။
၈။ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်သိပါ
သူက သင့်ဘဝထဲက တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်ဖို့ လုပ်နေချိန်မှာ ငါဟာ မကောင်းဘူး၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးလို့ တွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူး။ သူလုပ်သမျှက သင့်အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တန်ဖိုးကို သိပါ။ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ တခြားသူတစ်ယောက်ပေါ်မှာ တည်မှီနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
၉။ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုခုကို ရှာဖွေပါ
သင်တို့အချစ်ရေးဟာ အေးစက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေပြီး အတူတကွလုပ်ဆောင်လို့ အချစ်ရေးကို ပြန်လည်လန်းဆန်းတက်ကြွလာအောင်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
၁၀။ သူ့ကို စွန့်ပစ်ခဲ့လိုက်ပါ
တစ်ခါတလေမှာ သင်ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားပါစေ သူ့ဘက်က ဘယ်လိုမှ သင့်အပေါ် စိတ်မဝင်စားတော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိ ဖြစ်လာနေပြီဆိုရင် သူ့ကို လက်လွှတ်လိုက်ပါတော့။ အဆင်ပြေဖို့ သင့်မှာ အသေအလဲ ကြိုးစားနေချိန်မှာ သူက ဘာမှမလုပ်ဘူးလေ။ သင်လိုမိန်းကလေးမျိုးဟာ ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ အောက်ကျနောက်ကျခံစရာမလိုပါဘူး။
ှSource & Photos : Life